सात वर्षका बच्चाले गरे आफ्नी आमासँग बिहे, कारण थाहा पाउनु भयो भने तपाई आफ्नो आशु रोक्न सक्नु हुदैन – Khabaarpati
सात वर्षका बच्चाले गरे आफ्नी आमासँग बिहे, कारण थाहा पाउनु भयो भने तपाई आफ्नो आशु रोक्न सक्नु हुदैन
October 11, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on सात वर्षका बच्चाले गरे आफ्नी आमासँग बिहे, कारण थाहा पाउनु भयो भने तपाई आफ्नो आशु रोक्न सक्नु हुदैन
काठमाडौं – आमाबुवा आफ्नो सन्तानको सबै सपना पूरा गर्छन् । लन्डनमा बस्ने सात वर्षीय लोगनले पनि आमासँग बिहे गर्ने सपना देखेपछि त्यो सपना पूरा भएको छ ।आमा जोलिएनले छोरोको यो इच्छा पूरा गरिन् र उनको पूरा परिवारले यसमा साथ दियो । यसमा एक अत्यन्त भावुक कारण छ ।
लोगनलाई जेनेटिक डिसअर्डर ल्युकोडिस्ट्रोफी नामक खतरनाक रोग लागेको छ र उनी बाँच्ने दिन कमै मात्र छ । लोगनको बालमनले मर्नुअघि आमासँग बिहे गर्न खोज्यो । लोगन आफूलाई राजकुमार र आफ्नी आमालाई राजकुमारीका रूपमा हेर्न चाहन्थे ।छोरोको इच्छा पूरा गर्न लोगनका मातापिताले फेयरीटेल वेडिङ आयोजना गरे । आमा जोलिएन राजकुमारी बनिन् अनि लागन राजा बने ।
बिहे ब्युटी एन्ड द बीस्ट थिममा थियो । नक्कली बिहे भएपनि पूरै परिवार, नातेदार र साथीहरूलाई बोलाइएको थियो । बिहेमा वचनको साटो आमाले छोरोको सुरक्षा गर्ने र सधैं साथ बस्ने वाचा गरिन् ।लोगनकी आमा जोलिएनका लागि यो क्षण भावुकतापूर्ण थियो । अनौठो बिहेमा आएका सबै पाहुनाको आँखामा आँसु थियो ।जोलिएनले भनिन्, ‘मेरा लागि यो भावुक पल हो । साथी र परिवारको सहयोग पाएर म अभिभूत भएको छु । हामीले सँगालेको यो यादलाई सधैं जोगाएर राख्नेछु ।
उडिरहेका करिब १५ सय चराहरु एक्कासी भुईमा बजारिएर म’रे, वैज्ञानिकहरु नै चकित
बस्दा खुट्टा हल्लाउने बानी छ ? बेवास्ता नगर्नुहोस्, यस्तो रोग हुनसक्छ !
October 21, 2020 goodmam